Umshini Wokuqhumisa Umshini Wokuqhumisa Kasikilidi wase-China Umshini Wokufaka Ugwayi Kasikilidi Amaphilisi Ubuhlalu Ibhokisi Lomshini Wogwayi Ibhokisi ifektri nabakhiqizi | Dayang
Umshini wokuphusha omncane
3 ko-1 kofake isicelo
Imfashini entsha 3 kugwayi ongu-1...
Izinsiza Zentuthu Ugwayi...
I-Pop Bursting Mac kagwayi...
Umshini Wokuqhumisa Umshini Wokuqhumisa Ugwayi Kasikilidi Amaphilisi Amaphilisi Ubuhlalu Ibhokisi Lomshini Kasikilidi
Kulula ukuyisebenzisa, kulula ukuthwala, azikho izithasiselo, awekho amakhemikhali, anobungani bemvelo, anobungani bemvelo, futhi ingacindezelwa kalula ngokufaka isibambi sikagwayi.
I-Suite for Regular size ugwayi kanye neshubhu yesihlungi seshubhu ye-Slim Slim Cigarettes. Chofoza futhi ujabulele iphunga lephunga olithandayo, iphunga lihlala likhona.
Ubuhlalu bokuqhunyiswa kukagwayi kanye ne-Cigarette Capsule Dispenser 2 koku-1 iyaphatheka kakhulu, ingabamba ubuhlalu obuqhumisa ugwayi obungama-30-60pcs.
Ukuphepha kwezinto ezibonakalayo: I-crushball dispenser yenziwe ngezinto eziphephile zokudla. Kuphephe kakhulu futhi kulula.Ibanga lokudla elingu-316L intwasahlobo Ingamelana izikhathi eziyizinkulungwane eziyishumi zokusetshenziswa Ibanga lokudla ipush stick Rarulula inkinga yokukhunta namagciwane ezintini zoqalo.【Great Gift Ideas】 I-Premium eklanywe i-trench lighter epakishwe ebhokisini lesipho elihle nelinhle , okuyisipho esihle kakhulu kubangani bakho nemindeni kunoma yiziphi izikhathi ezifana neBhizinisi, Usuku Lokuzalwa, Umshado, Usuku Lobaba, Usuku Lwesikhumbuzo, Ukubonga, UKhisimusi njll.
I-Capsule Pusher I-capsule kagwayi
Ukusetshenziswa Gcwalisa amaphilisi ngokushesha kugwayi
Usayizi Isebenza phakathi kuka-Φ3.8mm
Okubalulekile Ukufafaza kokuvikela imvelo kwe-UV matte
Iphakheji 1pc Isikhwama ngasinye noma ngokwezifiso ngokusho kwamakhasimende
Amasampula Sithanda ukukunikeza amasampula
Ukusetshenziswa Okungenabungozi: Izinto zangaphakathi zepulasitiki zebanga lokudla le-PP azinangozi emzimbeni womuntu, futhi induku yokusunduza ibhola ingamelana nezikhathi eziyi-10,000 zokusetshenziswa.
Ingagugi futhi Ayinamthunzi: Igobolondo elinopende ovikela imvelo we-UV matte alikwazi ukuguga futhi alibuni.
Usayizi Womkhiqizo: I-Pusher yobuhlalu icishe ibe ngu-34 * 80 * 13mm, incane futhi ilula.
Ukusetshenziswa Komkhiqizo: I-pusher yobuhlalu ingaxazulula izinti ze-bamboo ngokuzalanisa isikhunta.
Isidingo Sosayizi: Inguqulo endala inesidingo sikasayizi wezinhlayiyana esingu-3.1-3.4mm, kanye nenguqulo ethuthukisiwe engu-2.6-3.8mm
1. Kancane uthele ubuhlalu obunuka kamnandi phezulu kwebhokisi lobuhlalu ububeke emnyango.
2. Khipha ugwayi ojwayelekile ngaphandle kobuhlalu obunephunga elimnandi obushunyekiwe ngaphambili, uwufake embobeni engezansi, bese uwuphushela kancane emgudwini wokugcwalisa.
3. Faka ugwayi ovamile oqede umzila wokugcwalisa emgodini ongezansi kwesokunxele, futhi induku yokugcwalisa iphusha ubuhlalu obuphunga elimnandi esiteshini sokugcwalisa ngokushelela.
4. Bamba ugwayi ngesandla esisodwa, bese uphusha uthi lobuhlalu ngesinye isandla ukuze ugxilise ubuhlalu obunuka kamnandi emlonyeni. Khama ubuhlalu obunephunga elimnandi bese ububasa ukuze buqedele.
IShijiazhuang DaYang Environment Engineering Co., Ltd yasungulwa ngo-2016, etholakala esifundazweni saseHebei. I-DaYang igxile ekucwaningeni ngokukhiqiza nokusabalalisa ugwayi njenge-Cigarette Capsule, i-Capsule Pusher, i-Herb Grinder, i-Smoking Rolling Paper, i-Hookah njalonjalo.
Njengamanje, imikhiqizo yethu ithunyelwe eYurophu, eMpumalanga Ephakathi, eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, e-United States, eLatin America, eNingizimu Melika, e-Australia nakwamanye amazwe nezifunda.
Sizoba uzakwethu waseShayina ozokwenza uziqhenye , futhi senza imizamo yokukunikeza isevisi esezingeni eliphezulu nefika ngesikhathi.Sibheke ngabomvu ukusungula ukholo oluhle nobudlelwano obunobungane nawe.
Okwedlule: I-Burst Beads Tobacco Flavor Natural Cigarette Crush Ball Capsule capsule flavour capsule
Olandelayo: Izesekeli Zentuthu Isifakeli se-Cigarette Capsule Lighter
Ama-Capsules Ubuhlalu Ibhokisi Lomshini Wogwayi
Ibhokisi leSigareti le-Capsule Bead Burst Pusher Storage
Ibhokisi le-Capsule likagwayi
Ibhokisi likagwayi lobuhlalu
Ibhokisi le-Capsule yesihlungi sikagwayi
Uhlelo lokusebenza lwe-Smoke Accessories Cigarette Capsule Lighter...
Inani Elingcono Kakhulu I-Menthol Balls Cigarette Capsule Pen ...
Isishicileli sogwayi esisha semfashini esiqhumayo...
2021 Ugwayi omusha we-menthol webhola le-flavour pu...
Imfashini entsha 3 ku-1 Cigarette capsulet pusher ap...
Yiba yingxenye ye-DAYANG